जहाँ दुखी त्यही बढि दुख, अलपत्र ब्यक्तिलाई संरक्षण दिने स्नेही काखमा नै चल्यो रुवाबासी (हेर्नुहोस भिडियो)
केही दिन यता परेको अबिरल बर्षाका कारण देशैभार ठूलो धनजनको क्षति भयो । म धेरैले ज्यान गुमाए धेरै अंगभंग भए, धेरै घरबार बिहिन भए । यसपटकको बर्षाले नेपालका तराइ भागलाई मात्र नभएर काठमाडौ उपत्यकाका केही स्थान पनि डुबाए । कैयैले ज्यान गुमाए । यस्तै डुबानमा पर्‍यो सबैलाई दुखी, बेसाहारालाई साथ दिने स्नेही काख, जसलाई सुरु गरेकी हुन, श्री नेहा पोखरेलले । यहि डुबानमा परेको दर्दनाक भिडियो देखेपछी केही ब्यक्तिले सहयोग गर्न चाहे यसैक्रममा सहयोग लिने क्रममा दिब्यस्वर बाबा यानिकी माया श्रेष्ठ लगायतले सहयोग गर्न उपस्थित भए । तर त्यहाको दर्दनाक ओइडा देखेर कसैको आँसु रोकिएन अनि अन्कमाल गर्दै रोए, संगै दुख बाडेको अनुभुती गरे ।
के हो स्नेही काख ?
स्नेेेेहि काख मानसिक सन्तुलन गुमाएका सडकमा अलपत्र भएका व्यक्तिको संरक्षण स्थल हो, ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको नेपाली स्नेही काख । यो संस्था २०६७ सालदेखि श्रीनेहा पोखरेलले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। १६ वर्षको उमेरदेखि नै यो संस्था सञ्चालन गर्दै आएकी उनले आफ्नो सबै कमाई यसैमा लगाएकी छिन्।श्रीनेहा पेसाले एक मोडल हुन्। म्युजिक भिडियो र नाटकमा अभिनय गरेर आएको रकम उनी सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरुका लागि खर्च गर्छिन्। नृत्य प्रशिक्षक भएर पनि उनले थुप्रै वर्ष काम गरिन्। आठ कक्षा पढ्दादेखि नै नृत्य प्रशिक्षक भएर काम गरेकी उनले एक दर्जन म्युजिक भिडियो र विभिन्न नाटकहरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन्।
कसरी चलेको छ स्नेही काख ?
अभिनय गरेर जति पैसा आउँछ त्यो सबै संस्थाकै लागि खर्च गरेको उनले सुनाइन्। उनले अहिलेसम्म त आफ्नै कमाइबाट सबै खर्च चलाउँदै आएकी छिन्। अहिले भने आफ्नो कमाइबाट मात्र खर्च धान्न निकै गाह्रो भएको उनी सुनाउँछिन्। नृत्य प्रशिक्षण र संस्था एकै साथ सञ्चालन गर्न समय नहुने भएकाले नृत्य छोडेको उनले बताइन्।
नृत्य कक्षा छोडेपछि खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ, उनले भनिन्। संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मात्र ध्यान गएको छ, कतैबाट कसैको सहयोग पाउन पाए संस्थामा रहेका व्यक्तिका लागि केही राहत मिल्ने छ। अहिले पनि उनको संस्था स्नेही काखमा रहेका मनोरोगी तथा तिनका कोखबाट जन्मिएका सन्तानको लालनपालन एवं शिक्षाका लागि श्री नेहा कहिले सडक नाटक, कहिले थिएटर नाटक त कहिले सडकमा म:म बेच्ने काम गर्छिन् ।
सडकमा बलात्कार हुनेहरूमा मनोरोगीको संख्या उच्च रहेको उनको अनुभव छ । पोखरेलले गर्भवती, भर्खरै सुत्केरी भएका तथा सडक वा अस्पतालमा जन्मिएका नवजात शिशु ल्याएर आफैंले न्वारन, पास्नी आदि गरी लालनपालन एवं शिक्षा प्रदान गर्दै आएकी छिन् ।
के भन्छिन श्री नेहा ?
नेपाल कसरी असहाय मुक्त होला ? मैले यसरी आँखाका नानी जसरी राखेका सन्तान खरिद गर्न राम्रै डलर दिनेहरू आउँछन् तर हामी एकछाक खान्छौं तर नैतिकता विरुद्धको यस्तो काम गर्दैनौं । म त चाहन्छु नेपालबाट हाम्रा जस्ता संस्था निर्मूल हुन् । कसैलाई पनि फोहोरको थुप्रोबाट उठाउनु नपरोस् । मलाई विश्वमै मेरो देशको सम्मान बढेको हेर्ने मन छ । यसका लागि सबै नेपालीको मन अनि हृदय ठूलो हुनु जरुरी छ । युवाहरूमा सेवाभाव जागृत हुनु जरुरी छ ।